Ebe nchekwa akwụkwọ ntuziaka - Laptọọpụ dị ọnụ ala
Ọbịbịa nke draịva siri ike steeti ekwela ka kọmpụta akwụkwọ ndetu nweta ngagharị ma belata akụkụ nke ikpe ahụ. Na mgbakwunye, ha ewetala ọsọ nnweta dị elu karịa HDD ọdịnala. Site na ha ị ga-enweta mmalite ngwa ngwa ma ị ga-ahụ mmụba dị ịrịba ama na ...
Ịchọrọ RAM karịa na laptọọpụ gị mana ị maghị ma ị nwere ike ịgbasa ya? N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji nweta ya ma gbasaa RAM
Amaghị ihe bụ ihe nlereanya nke laptọọpụ gị? Echegbula onwe gị, anyị na-enye gị ụzọ 9 iji chọpụta. Ị maara ha niile?
Kọmpat zuru oke iji were gị n'ebe niile, mana ọ dịkwa oke iji mee ngwa ndị na-achọsi ike; Ma ọ bụ na laptọọpụ bụ ngwá ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ siri ike ma ọ bụ na-egwu egwu n'ụlọ na ọbụna n'okporo ụzọ. Ọ bụ ezie na mbadamba na smartphones na-ewu ewu, ndị ...